झुण्डिएको अवस्थामा सल्यानमा दुई महिलाको शव फेला « Gurash Online
झुण्डिएको अवस्थामा सल्यानमा दुई महिलाको शव फेला
२३ असोज २०७७, शुक्रवार (बेलुकीको ०५ : ०८)
छुटाछुटै् स्थानमा झु ण्डिएको अवस्थामा सल्यानमा शुक्रबार दुइ महिलाको शव फेला परेको छ । बागचौर नगरपालिकाको वडा नं. ९र ४ मा गरि दुई महिलाले झुण्डिएरआत्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।
आत्महत्या गर्नेमा नगरपालिकाको वडा नं. ९ डाँगीगाउँकी अन्दाजी ५३ वर्षिया महिला रहेकी छन । शुक्रबार बिहान घाँस काट्न भनेर नजिकैको जंगलमा गएकी उनी दिउँसो अबेरसम्म पनि घर नफर्किएपछि परिवारले खोजिगर्दा रुखमा झु ण्डिएरको अवस्थामा उनको शव फला परेको थियोे ।
आत्महत्या गर्नेमा बागचौर नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने अर्कि एक महिला रहेकी छन। शुक्रबार बिहान कोठमा झु ण्डिएको अवस्थामा उनको शव फेला परेको थियो । यसअघि पटकपटक आ त्म ह त्या को प्रयास गरेकी उनि डिप्रेशनमा रहेको भनिएपनी आत्महत्याको कारण भने खुल्न नसकेको र अहिले दुवैघटना अनुसन्धानको क्रममा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बागचाैर नगरपालिकाका कुन वडाकाे कहिले हुँदै छ फाेटो सहितकाे मतदाता नामावली संकलन
बागचौर, १६-मंसिर । भाेली अर्थात मंसिर १७ गते देखि २६ […]
नेकपा(एमाले)को दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्र चलिरहदा याेगेश भट्टराई द्वारा प्रेस विज्ञप्ति
११ मंसिर, चितवन । नेकपा (एमाले) को दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको […]
नेकपा माओवादी केन्द्र बागचौर नगर कमिटीको दाेस्राे नगर सम्मेलन उद्घाटन समारोह सम्पन्न
११ मंसिर, सल्यान ।नेकपा (माओवादी केन्द्र) बागचौर नगरपालिका नगर कमिटीको […]
शनिबार आज ७५३ वटै पालिकाको सम्मेलन गर्दै माओवादी
११,मंसिर।नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले शनिबार ७५३ वटा स्थानीय तहको अधिवेशन […]
माओवादी नेता बर्षमान पुन अनन्तको थप उपचारको लागि चिनको सेनजेनस्थित चाइना थर्ड हस्पिटलमा भर्ना
काङ्ग्रेस निर्वाचन : सभापतिमा धुर्व पुरी र उप सभापतिमा सन्तोश के सीको अग्रता
काँग्रेस सल्यानको निर्वाचन : १२२७ मत खस्यो, आजै मत गणना शुरुहुने
संचालकः झक्कु प्रसाद शर्मा
प्रधान सम्पादकः धनेश्वर खडका